Sahle-Work Zewde : Haweeneydii ugu horeysay oo Madaxweyne ka noqotay dalka Itoobiya - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Sahle-Work Zewde : Haweeneydii ugu horeysay oo Madaxweyne ka noqotay dalka Itoobiya
Sahle-Work Zewde : Haweeneydii ugu horeysay oo Madaxweyne ka noqotay dalka Itoobiya
Baarlamaanka Itoobiya ayaa maanta doortay Haweeneydii ugu horraysay ee madaxweyne ka noqota dalka Itoobiya, kadib markii xildhibaannada labada gole ee dalka Itoobiya ay isku raaceen inay dalkaasi madaxweyne ka noqoto Sahlework Zewdie.
Waxaa isla maanta is casilay madaxweynihii hore ee Itoobiya Mulatu Teshome oo awood qeybsi ahaan xilka u banneeyay, isbedello ka dhacay dalkaasi oo keenay in ra’iisal wasaare loo doorto Abiy Ahmed oo kasoo jeeda Qowmiyada Oromada.
Sahle-Work Zewde ayaa ahayd diblomaasiyad khibrad dheer ah oo xilal kala duwan kasoo qabatay Qaramada Midoobay, iyadoo hadda ka mid ahayd kaaliyeyaasha xoghayaha guud ee Q/Midoobay una qaabilsaneyd Midowga Afrika.
Ethopia Sahle-Work Zewde
Dowladda Somalia oo baabi'isay Shahaadooyinkii diiwaangelinta Maraakiibta sita Calanka Somalia (Wareegto)
10 sababood dartood Golihii Kismaayo oo Garowe ku guuldarreystay (Akhriso Qormo Falanqeyn ah)
Qoor-qoor, oo tababar u xiray ciiddammo katirsan daraawiishta Gal-mudug | Akhri xogtan
Shacabka ku dhaqan Jowhar, oo amar cusub lagu soo rogay.